I-China Double Lumen Endotracheal Tube mveliso kunye nabathengisi | Biotek
Ityhubhu ene-lumen kabini (i-DLT) yityhubhu ye-endotracheal eyilelwe ukwahlula amaphaphu ngokwasemzimbeni nangokwasemzimbeni. Iityhubhu ezine-lumen (i-DLTs) zezona zisetyenziswa kakhulu ukubonelela ngokungenisa umoya ngokuzimeleyo kwimiphunga nganye. Ukuphuma komoya omnye-kwemiphunga (i-OLV) okanye ukwahlukaniswa kwemiphunga ngumahluko osebenzayo kunye nokusebenza kwemiphunga emi-2 ukuvumela umoya wokukhetha womoya omnye wemiphunga. Omnye umphunga ongafakwanga umoya ungacimi okanye ushenxiswe ngugqirha ukuze uququzelele ukubonakaliswa kotyando kwimisebenzi engeyiyo yentliziyo esifubeni esifana ne-thoracic, esophageal, aortic kunye neenkqubo zomqolo. Lo msebenzi uphonononga ukusetyenziswa kwe-DLT, ukubonakaliswa kwayo, ukungqinelana, kunye neengxaki kutyando lwe-thoracic.
Ikhowudi yemveliso: BOT 109000
Isicelo: somsebenzi womphunga omnye (ukungqamanisa kunye non-ungqamaniso) ekusebenzeni kwesifuba okanye kwizigulana zomxhuzulane.
Ubukhulu: 28FR, 32FR, 35FR, 37FR, 39FR, 41FR
Uhlobo: icala lasekhohlo nelasekunene
Izinto ezibonakalayo zebakala le-PVC;
Ivolumu 2.High koxinzelelo cuff cuff;
3.Kwisihlanganisi esinemisebenzi emininzi;
4 cuff kabini kunye noyilo lumen kabini;
5. Uyilo olukhethekileyo lwetyhubhu yoxinzelelo oluphantsi kunye necuff bronchial inokunceda ukunciphisa i-esion ye-mucoca.
6. Ibhaluni yomqhubi wenqwelomoya kunye nekhofu enebala elinombala ofanayo, elinokukunceda ukugweba indawo yombhobho.
7. I-phlegm suction catheter: kukho i-catheters ezi-3, aba-2 baphumeleleyo banceda ekugwebeni indawo echanekileyo yokuncanca i-phlegm, ekhohlo ifunxa umlomo.
Ukucwangciswa kwesinxibelelanisi esijikelezayo: idibanisa i-ventilator ene-lumen bronchial ibe, enkosi kwisidibanisi esijikelezayo, indawo ye-ventilator eguqukayo.
1.Made grade yonyango PVC, ecacileyo egudileyo
2.Ivolumu ephezulu, ikhafu yoxinzelelo ephantsi igcina ukutywina okuhle
3. Amehlo eMurphy ukuthintela ukuphazamiseka ngokupheleleyo ekuphefumlweni
4. Igama leBrand: Biotek & OEM
5. Ifakwe isitayile esi-1, isinxibelelanisi sokutshintsha i-1 kunye neecatheters ezi-2 zokutsala.
6. Isetyenziselwa ukungena komoya omnye-wemiphunga, kwi-OPS ye-bronchus, utyando lwe-thoracic ect.
Icala lasekhohlo kunye necala lasekunene.
Egqithileyo IBakala loNyango lwe-PVC ye-Endotracheal Tube ene-catheter yokutsala
Okulandelayo: Ukulahleka kwemaski ye-lumen laryngeal mask kunye ne-silicone lma ye-anesthesia